‘Abazali bangisiza ngophiyano’ | Isolezwe
‘Abazali bangisiza ngophiyano’
intandokazi / 10 January 2019, 12:30pm / ZANELE MTHETHWA
UKUJABULELE ukunandisa emakho-nsathini aKwaZulu-Natal uLindi Ngonelo odlala uphiyano, othe bese kunesikhathi agcina ukuzonandisa ekhaya
OWESIFAZANE osengumdlali wophiyano ohlonishwayo uthi waphoqwa ngabazali bakhe abangabaholi bebandla. ULindi Ngonelo, osedlale nabaculi abaningi abadumile, uthe eseyingane wayengazi ukuthi abazali bakhe babemqeqeshela ikusasa eliqhakazile. ULindi, osanda kunandisa ezindaweni ezehlukene KwaZulu-Natal njengoba kade kungamaholidi kaKhisimusi, uzalwa uDkt Thandi Ngonelo ohola i-Act of Obedience Ministries noPastor Eddie Ngonelo oshone nyakenye.
ULindi, ongumbhali wamaculo, uthe akaphiwanga ukucula yize unina aziwa ukuthi uyigagu.
“Ngangingaqondi ukuthi kungani abazali bami bangithumele ukuyofunda ukudlala uphiyano ngineminyaka ewu-12. Inhloso yabo kwakuwukuthi ngidlale esontweni, bengazi ukuthi ngizoya kude emculweni. Ngaqala ngingaqondi kodwa ngagcina ngiluthanda uphiyano,” kusho uLindi.
Uthando nekhono lokudlala uphiyano lwanezelwa wukuhlangana noNicholas Engel owamfundisa kakhulu ukudlala i-jazz nomculo wokholo. U-Engel waba nguthisha wakhe wophiyano waze waqeda esikoleni.
ULindi, osanda kwethweswa iziqu zeBachelor of Practical Music Degree e-University of KwaZulu Natal (UKZN) uneHonours emculweni ayithole e-University of Pretoria.
Kumanje ufundisa umculo e-East Rand School of the Arts, eBenoni. Uke wafundisa nase-UKZN phakathi kuka- 2012 no-2013. Waduma kakhulu eqenjini lomculo labesifazane bodwa iHeels Over Head ayidlalele kusukela ngo-2009 kuya ku-2013.
IHeels Over Head yawina umncintiswano weYamaha ngo-2010, yaqokwa nakumaSouth African Music Awards emunxeni weBest Contemporary Jazz ngo-2011. Kubaculi aseke wabadlalela kubalwa uTu Nokwe, Swazi Dlamini, Nomsa Mazwai, Thandiswa Mazwai, Siphokazi noBrenda Mntambo.
Wazalelelwa eGoli kwathi eseneminyaka ewu-10 abazali bakhe babuyela eThekwini ngaphambi kokuqala ibandla ngo-1998.
NgoDisemba unandise emakhonsathini amathathu ezindaweni ezehlukene KwaZulu-Natal, athe bekungamakhonsathi abalulekile kuyena.
“Bese kunesikhathi eside ngagcina ukuzodlala ekhaya. Bekungokokuqala ngizonandisa KwaZulu-Natal ngo-2018.”
ULindi ufisa ukuhambela amazwe ashiyelane inkundla nezinkakha ze-jazz aphinde aqophe nama-albhamu. Okwamanje uyakujabulela ukufundisa umculo futhi ufisa ukugxila kwiJazz Performance.